Swiss-Belhotel International waxay dejisay ballaarinta Greater Australasia
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Australia » Swiss-Belhotel International waxay dejisay ballaarinta Greater Australasia
Wararka Australia • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka New Zealand • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • News • jiga • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka
Swiss-Belhotel International howlaheeda ku balaarinaya New Zealand iyada oo lala saxeexday laba hoteel oo horumarsan oo ku yaal Queenstown.
Shirkaddu waxay bilaabi doontaa laba hawlgal oo cusub suuqa Kiwi dhammaadka sannadka 2020, iyada oo la bilaabi doono Swiss-Belhotel & Residences Queenstown, iyo kan ka yar, ee aadka u qiimeeya miisaanka leh ee 'Zest Queenstown' ee ay leedahay shirkadda Swiss-Belhotel oo labaduba furmaya isla waqtigaas.
Swiss-Belhotel International waxay horey uga shaqeysay toban guri oo Zest ah oo ku yaal Indonesia tanina waxay noqon doontaa Zest kii ugu horreeyay ee laga furo New Zealand.
Ballaarinta Australasia waxay arki doontaa in shirkaddu qaadato jagooyinka maalgashiga iyada oo loo marayo lahaanshaha hantida, xuquuqda maamulka iyo heshiisyada, iyo sidoo kale qandaraasyada maamulka. Kooxdu waxay hadda la shaqeyneysaa dhowr maalgalin oo caalami ah si loo kobciyo qaab dhismeedka caasimadda ee Swiss-Belhotel International. Tani waxay awood u siin doontaa kooxda inay ka faa'iideystaan ​​fursado maalgashi oo dheeraad ah suuqyada koraya, sida New Zealand iyo Australia.
Horumarkaani waa qeyb ka mid ah istiraatiijiyadda sii socota ee is-ballaarinta istiraatiijiga ah ee Swiss-Belhotel International ee New Zealand, iyadoo lagu taageerayo tirada dalxiis ee sii kordheysa ee suuqan.
"Waxaan ku kalsoonahay warshadaha dalxiiska ee New Zealand - gaar ahaan magaalada Queenstown, oo u baahan kaabayaal cusub si ay ula socdaan baahida martida," ayuu yiri Gavin M Faull, Guddoomiyaha iyo Madaxweynaha Switzerland-Belhotel International.
"Waxaa naga go'an inaan fiirino fursado dheeraad ah suuqa maxalliga ah," ayaa lagu soo gabagabeeyay Faull.
Shirkadda maareynta hoteelka ayaa sidoo kale wadahadal kula jirta horumariyeyaasha Australiya waxayna sameyn doontaa ogeysiisyo ku saabsan horumarka hoteelka lixda bilood ee soo socota.
Waxaa iska leh oo ka shaqeeya New Zealander Gavin Faull, Swiss-Belhotel waxay hudheelkeedii ugu horreeyay ka furatay magaalada Queenstown sanadkii 2013 iyadoo la leh Swiss-Belresort Coronet Peak. Kadib waxay u balaarisay Auckland sanadkii 2016 iyadoo la furay Switzerland-Belsuites Victoria Park iyadoo sii dheer la wareegida Switzerland-Belsuites Pounamu Queenstown sanadkii 2017. Guryaha cusubi waxay kordhinayaan bixinta shirkada Australasia ilaa sideed huteel.
Swiss-Belhotel International waxay hada leedahay 150 huteel iyo mashaariic oo laga helo 22 dal oo adduunka ah. Iyada oo shan guri oo ku yaal New Zealand la filayo dhammaadka 2020, suuqa maxalliga ah ayaa hadda qayb muhiim ah ka ah horumarka kooxda.
Si sharaf leh ayey New Zealand u leedahay, shirkadda maaraynta hudheelku waxay ku bixisaa talo soo jeedin u gaar ah New Zealand iyo mid soo jiidata xiisaha soo-saareyaasha iyo maalgashadayaasha. Waxaa sidoo kale si caalami ah loogu meeleeyay xafiis madax shirkadeed oo ku yaal Hong Kong - hubinta in ay leedahay wax badan oo ay bixiso marka ay soo jiidanayaan dalxiisayaasha caalamiga ah ee New Zealand.
Iyada oo tirada martida ee Queenstown ay gaarayaan seddex milyan sanadkii, guryaha cusub ee huteelka ayaa geyn doona qolyo dheeraad ah oo gaaraya 437 qol oo loo raaciyo Queenstown, iyagoo hubinaya in goobaha dalxiiska loo tago ay la socon karaan tirada booqdayaasha.
Ku saabsan guryaha cusub
Swiss-Belhotel & Deganaanshaha waxay noqon doontaa hanti 4 ½ xiddig leh oo lagu soo bandhigi doono hudheel adeeg buuxa leh, oo ay weheliyaan guryo qalabaysan. Xarumaha si wanaagsan loo magacaabay waxay ka koobnaan doonaan naqshad dhisme oo isku dhafan bilicsanaanta casriga iyo maxalliga ah, gudaha iyo qalabka guryaha casriga ah, tikniyoolajiyaddii ugu dambeysay, iyo sidoo kale goobaha cuntada iyo cabitaanka iyo soo dhaweyn 24-saac ah.
Huteelka la isku daray wuxuu ka koobnaan doonaa 194 qol oo ku fadhiya 24sqm iyo 32 dabaq (hal qol jiif, 75-95 sqm, iyo laba qol jiif, 120-150 sqm). Huteelka waxaa loogu talagalay kuwa raadinaya tas-hiilaad dhameystiran oo si wanaagsan loo magacaabay oo la jaanqaadaya heer caalami.
Nooca firfircoon ee Zest waa hudheel qiimo leh oo lagu soo bandhigayo qalab casri ah qiimo jaban. Waxaa loogu talagalay iyada oo maanka ku haysa socotada bulsheed waxayna ka codsaneysaa dhalinyarada iyo dhalinyarada qalbigooda.
Horumarinta waxaa maamula Tony Gapes oo jooga Redwood waxaana kasoo muuqan doona 223 qolal Zest ah (16 qol oo sqm ah), 160 Pods (24 kapul kaabulo oo hurda, oo sideedii u jiifta sideedii) iyo musqulo wadaag ah.
Xarumo waawayn oo bulsheed ayaa goobta ku jiri doona, oo ay weheliyaan soo dhaweyn 24-saac ah, aagagga cuntada iyo astaamaha teknoolojiyada aan xadka lahayn oo dhan.
Labada guriba waxay ku yaalliin wadada loo yaqaan 'Gorge Road,' Queenstown, oo socod toban daqiiqo socotaa ah oo badhtamaha magaalada ah iyo 100 mitir oo midba midka kale ka xigo.
US - Kanada xurkeeda dib u furid la'aan